Sina Seranana seranan-tsambo marobe vaovao maimaimpoana haingana USB charger PD30W fanamboarana sy orinasa | Staba Electric
1. endrika maivana kely maivana amin'ny haben'ny sakaiza
*Iphone Wall Charger 30W Fampahalalana momba ny famaritana
Ny charger USB-C rindrina dia mety indrindra ho an'ireo mpampiasa izay te hanana charger kely izay maivana sy mahery. Ny famoahana hatramin'ny 30 W, charger rindrina PD dia ny fitaovana tianao indrindra ao anatin'izany ny telefaoninao, Nintendo Switch, ary MacBook (miankina amin'ny antsipirian'ny fitaovana ny fotoana famandrihana).
Ny lelan'ny valin'ny rindrin'ny rindrina dia mamorona endrika endrika mora mandeha, raha ny fitantanana ny tariby kosa mitazona ny taribinao milamina. Namboarina miaraka am-piarovana, fiarovana circuitry fitantanana manome mahery vaika, overcurrent, overheat, fohy lalana ary ny fitomboan'ny fiarovana, ary mifanaraka amin'ny Departemantan'ny angovo ambaratonga faha-VI an'ny Etazonia.
Fampandehanana haingana PD miaraka amin'ny fampifanarahana ambony & fahalalahana, vahaolana famahana roa-in-iray izay afaka manohana ireo fitaovana mandeha amin'ny herinaratra USB A / C toy ny telefaona sy solosaina finday hiasa irery na miaraka. Ny mpamaky rindrina USB miaraka amina famolavolana plug azo ovaina dia ahafahanao misoroka ny toeram-pivoahana hafa ary mamerina mametraka ny seranana USB A / C ho an'ny fametrahana tariby mifandray tsara - tena ilaina indrindra rehefa mampiasa tariby herinaratra na mpiaro onja miaraka amina toerana maro. Ary koa amin'ny chip IC marani-tsaina - Ny chip IC mandroso dia mamantatra ary manome ny hery famahanana optimum ho an'ny fitaovana mifandray. Ny fitaovana ampiasainao dia haingana araka izay azo atao raha miaro ny ainao bateria. (Mifanaraka amin'ny famandrihana PD & QC).
Premium sy Portable - Nosedraina ireo seranana mba mahazaka fampiasana mihoatra ny 10.000 ary novolavolaina ny charger mba hahazoaana ny famandrihana hatrany mandritra ny 10,000 ora farafahakeliny, hanome anao kalitao azonao ianteherana. Pd adapter adiresy amin'ny fizarana herinaratra manan-tsaina, manatsara ny fahombiazan'ny asa na fitaovana tokana na maromaro. Izy io dia natao hiara-miasa amin'ny solosaina sy ny fitaovana marani-tsaina farany mamela ny orient orient plug ary ny famerana haingana kokoa.
*Parameter USB Wall Charger 30W
Refy: 52 * 25 * 45mm
Charger Multi Usb Ultra Fast Charger
Ampiasaina amin'ny seranan-tsambo fanaterana herinaratra USBC, ary feno herinaratra mivoaka 30W amin'ny alàlan'ny teknolojia QC3.0, ity adapter ity dia afaka manome ny iPhones sy takelaka takelaka farany fiampangana haingana.
Fifanarahana & Flexibility Pd Usb C Charger
Vahaolana famahana roa-in-iray izay afaka manohana ny fitaovana mandeha amin'ny USBC sy USBA toa ny iPhone, Samsung ary solosaina finday USBC hafa hiasa na tsy miankina na miaraka.
Miaraka amin'ny seranan-tsambo USB A sy USB C, dia afaka miasa miaraka amin'ireo fitaovana elektronika isan-karazany toy ny iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XS, XS Max, XR, X, sns.
Charger kely USB Portable Usb
Raiso ny habaka mitovy amin'ny Airpods ary afaka miditra mora foana amin'ny paosy ianao na aiza na aiza, ary azonao atao ny mitondra azy eny am-pandehanana.
Previous: USB manara-penitra haingam-pandeha haingana rindrambaiko USB charger PD30W
Manaraka: Portable fast gan type c adapter wall usb charger PD 18W